Lanonam-pahatsiarovana :: Nomen-danja ireo mpitandro filaminana maty sy maratra am-perinasa • AoRaha
Lanonam-pahatsiarovana Nomen-danja ireo mpitandro filaminana maty sy maratra am-perinasa
Nahazo hasina ireo mpitandro filaminana namoy ny ainy sy maratra am-perinasa. Niray hina nanome mari-pankasitrahana ny velona sy naha-tsiaro manokana an’ireo namoy ny ainy ireo mpitondra fanjakana, notarihin’ny Praiminisitra, Ntsay Christian sy ireo minisitra telo misahana ny filaminana, teny Ambohijatovo, omaly, nandritra ny lanonana fahatsiarovana ny faha-44 taona nahafatesan’ny kolonely Ratsimandrava Richard.
Tamin’ny lahateniny dia nanome toky ny vahoaka malagasy ny Praiminisitra fa: “ao anatin’ny fotoana fohy dia tsy maintsy ho azo tsapain-tanana ny fandriampahalemana”. Momba ny lanonana fahatsiarovana ny kolonely Ratsimandrava Richard, kosa dia nilaza ny lehiben’ny go-vernemanta fa: “fakana lesona amin’ny fitiavan-tanindrazana ny zava-nisy ka tsara ho fakan-tahaka”. “Momba ireo mpitandro filaminana nindaosin’ny fahafatesana tamin’ny ady amin’ ireo jiolahy dia nahafoy ny ainy ho an’ny hafa izy ireny ka mendrika fankasitrahana”, hoy hatrany i Ntsay Christian.
Ny Controleur général Rafanomezantsoa Roger, mi-nisitry ny Filaminam-bahoaka kosa nilaza fa: “ilaina ny firaisankinan’ny mpitandro filaminana amin’ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana. Porofo mivaingana sahady izao fiarahan’ny Tafika, Pôlisy ary Zandary izao fa asa fa tsy kabary no atao”, hoy izy.
“Hisy manomboka izao ny andro hatokana ho an’ireo mpitandro filaminana mamoy ny ainy amin’ny ady amin’ny jiolahy sy ireo maratra hiarahan’ny Tafika, ny Pôlisy ary ny Zandarimaria. Ho mariky ny firaisankinan’ny telo tonta io”, hoy ny jeneraly Ravalomanana Richard.